Ihe Anyị Ga-amụta n’Aka Joana
“Ka Agwaetiti Niile Ṅụrịa Ọṅụ”
Na-atụgharị Uche n’Ịhụnanya Na-adịgide Adịgide Jehova Nwere
Na-atụ Anya Ya
Kwadebe Ugbu A Maka Ibi n’Ụwa Ọhụrụ
Zere Mkpakọrịta Ọjọọ n’Oge Ikpeazụ A
“Jehova Kpọtara Unu Frans Ka Unu Mụta Eziokwu”
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) ỌGỌST 2015
ỌTỤTỤ ndị ma na Jizọs nwere ndịozi iri na abụọ. Ma o nwere ike ịbụ na ha amaghị na ụfọdụ n’ime ndị na-eso ụzọ ya bụ ụmụ nwaanyị só ya jee ozi. Joana so n’ụmụ nwaanyị ndị ahụ.—Mat. 27:55; Luk 8:3.
Gịnị ka Joana rụụrụ Jizọs mgbe ọ na-eje ozi ya n’ụwa? Olee ihe anyị ga-amụta n’aka ya?
ÒNYE BỤ JOANA?
Joana bụ “nwunye Kuza, bụ́ onye na-elekọtara Herọd ụlọ.” O nwere ike ịbụ Kuza na-ahụ maka ihe ndị a na-eme n’ụlọ Herọd Antipas. Joana so n’ọtụtụ ụmụ nwaanyị Jizọs gwọrọ ọrịa. Ya na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ so Jizọs na ndịozi ya gaa ọtụtụ ebe.—Luk 8:1-3.
Ndị nkụzi ndị Juu na-ekwu na ụmụ nwaanyị ekwesịghị ịna-anọ ebe ụmụ nwoke na-abụghị ndị ikwu ha nọ, ma ya fọdụzie iso ha gaa ihe. Ha kwukwara na ụmụ nwoke ndị Juu na ụmụ nwaanyị ekwesịghịdị ịna-akparịta ụka. Jizọs leghaara ụdị omenala ahụ anya. O kwere ka Joana na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ kwere ekwe soro ya na ndị na-eso ụzọ ya gaa ebe dị iche iche.
Joana so Jizọs na ndịozi ya n’agbanyeghị na ndị ikwu na ibe ya ga na-ele ya anya ọjọọ. Ndị niile chọrọ iso ụzọ Jizọs kwesịrị ijikere ịgbanwe ihe ụfọdụ ha na-eme. Ma, Jizọs kwuru banyere ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Nne m na ụmụnne m ndị ikom bụ ndị a na-anụ okwu Chineke ma na-eme ya.” (Luk 8:19-21; 18:28-30) Obi ọ́ dịghị gị ụtọ ịma na Jizọs ji ndị na-agbasi mbọ ike ịbụ ndị na-eso ụzọ ya kpọrọ ihe?
O JI IHE NDI O NWERE JEERE HA OZI
Joana na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ‘ji ihe ha nwere jeere’ Jizọs na ndịozi ya ozi. (Luk 8:3) Otu onye na-ede akwụkwọ kwuru na ihe Luk na-ekwu abụghị na ụmụ nwaanyị ndị ahụ na-esiri ha nri, na-asara ha efere, na-adụkwara ha ákwà. O kwuru na o nwere ike ịbụ na ha mere otú ahụ, ma ọ bụghị ihe Luk kwuru. O yiri ka hà ji ego ha na ihe ndị ọzọ ha nwere na-egboro ndị ha na ha so mkpa ha.
Jizọs na ndịozi ya arụghị ọrụ ego mgbe ha na-aga n’obodo dị iche iche ezi ozi ọma. N’ihi ya, ọ ga-abụ na ha enweghị ego ha ga-eji na-azụta nri ihe dị ka mmadụ iri abụọ so ha ga na-eri, na-egbokwa mkpa ha. N’agbanyeghị na o nwere ike ịbụ na a na-ele Kraịst na ndịozi ya ọbịa, “igbe ego” ha na-eji gosiri na ọ bụghị mgbe niile ka ha na-atụ anya ka ndị mmadụ lee ha ọbịa. (Jọn 12:6; 13:28, 29) Ọ ga-abụ na Joana na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-enye onyinye e ji na-egbo mkpa ha.
Ụfọdụ ndị na-ekwu na nwaanyị bụ́ onye Juu anaghị enwe ego ma ọ bụ ngwongwo. Ma, ihe ndị e dere n’oge ahụ gosiri na e nwere ụzọ dị iche iche nwaanyị bụ́ onye Juu nwere ike isi nweta ego. Nke mbụ nwere ike ịbụ ihe o ketara n’aka nna ya na-amụtaghị nwoke. Nke abụọ abụrụ ihe mmadụ nyere ya. Nke atọ abụrụ ego e kwuru na di ya ga-akwụ ya ma ọ bụrụ na a gbara ya alụkwaghịm. Nke anọ abụrụ ego si n’ihe di ya nwụrụ anwụ hapụrụ. Nke ise abụrụ ego o ji aka ya kpata.
O doro anya na ndị na-eso ụzọ Jizọs nyere onyinye otú ike kwere ha. Ụfọdụ n’ime ha nwere ike ịbụ ụmụ nwaanyị bụ́ aka ji akụ̀. Ụfọdụ ndị kwuru na Joana nwere ezigbo ego ebe ọ bụ na di ya bụ onye na-elekọtara Herọd ụlọ. O nwere ike ịbụ ụdị onye ahụ zụtaara Jizọs uwe dị oké ọnụ, nke na-enweghị ebe a dụkọtara ya. Otu onye na-ede akwụkwọ kwuru na “ụmụ nwaanyị ndị di ha bụ ndị na-akụ azụ̀” agaghị azụtali ụdị uwe ahụ.—Jọn 19:23, 24.
Baịbụl ekwughị hoo haa na Joana nyere Jizọs onyinye. Ma, ọ gbalịrị ike ya. E nwere ihe anyị ga-amụta na ya. Ọ bụ anyị ga-ekpebi ihe anyị ga-eji akwado ihe gbasara Alaeze Chineke nakwa ma ànyị ga-enye onyinye ma ọ bụ na anyị agaghị enye. Ihe dị́ Chineke mkpa bụ ka anyị jiri obi ụtọ mee ihe anyị ga-emeli.—Mat. 6:33; Mak 14:8; 2 Kọr. 9:7.
MGBE E GBURU JIZỌS NA MGBE Ọ NWỤCHARA
Ọ dị ka Joana ọ̀ nọ mgbe e gburu Jizọs, ya na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ, “bụ́ ndị na-eso ya ma na-ejere ya ozi mgbe ọ nọ na Galili, na ọtụtụ ndị inyom ndị ọzọ ya na ha so gbagote Jeruselem.” (Mak 15:41) Mgbe e buturu ozu Jizọs n’elu osisi ịta ahụhụ ka a gaa lie ya, “ndị inyom ahụ, ndị ya na ha so pụta na Galili, so gaa kirie ili ncheta ahụ na otú e si lie ozu ya; ha wee laghachi ịga kwadebe ihe na-esi ísì ụtọ na mmanụ na-esi ísì ụtọ.” Luk kwuru na ụmụ nwaanyị ndị a bụ “Meri bụ́ Magdalin, na Joana, na Meri nne Jems.” Ha atọ gaghachiri n’ili ahụ mgbe ụbọchị izu ike gara ma hụ ndị mmụọ ozi gwara ha na a kpọlitela Jizọs n’ọnwụ.—Luk 23:55–24:10.
Joana na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ kwere ekwe meere Onyenwe ha ihe ha nwere ike ime
O nwere ike ịbụ na Joana so ná ndị na-eso ụzọ Jizọs zukọrọ na Jeruselem n’ụbọchị Pentikọst afọ 33, ha na nne Jizọs na ụmụnne ya. (Ọrụ 1:12-14) O nwere ike ịbụ Joana gwara Luk ihe ndị ọ ma banyere Herọd Antipas ebe ọ bụ na di ya arụtụrụla Herọd ọrụ, nke ka nke, ebe ọ bụ naanị Luk kpọrọ aha ya.—Luk 8:3; 9:7-9; 23:8-12; 24:10.
Ihe Baịbụl kọrọ banyere Joana na-akụziri anyị ihe ụfọdụ anyị kwesịrị ichebara echiche. O jeere Jizọs ozi otú ike ya hà. Ọ ga-abụrịrị na obi dị ya ụtọ ma ọ bụrụ na onyinye o nyere mere ka Jizọs, ndịozi ya, na ndị na-eso ụzọ ya ndị ọzọ nwee ike ịga ebe dị iche iche kwusaa ozi ọma. Joana jeere Jizọs ozi ma jiri obi ya niile kwado ya n’oge nsogbu. Ụmụnna nwaanyị kwesịrị iṅomi àgwà ọma ahụ ọ kpara.
mailto:?body=Ihe Anyị Ga-amụta n’Aka Joana%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2015603%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe Anyị Ga-amụta n’Aka Joana
ỌGỌST 2015 ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ)
mailto:?body=ỌGỌST 2015 ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ)%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dw15%26issue%3D20150815%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=ỌGỌST 2015 ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ)